Ukwenza kahle kakhulu
Injongo & Umbono
Impilo Nokudla Okunempilo
I-Gelatin edliwayo ephaketheni lebhokisi: 500g/ibhokisi
I-gelatin edliwayo engu-300 iqhakaza ene-viscosity ephezulu
I-Gelatin 250 Bloom
I-Collagen Yebha Yokudla
Izinhlanzi ze-Collagen Peptides
2 g Ishidi leGelatin
Ishidi le-Gelatin 2.5g
3g Gelatin Ishidi
5 g Ishidi leGelatin
Amashidi e-Gelatin Abonisa Ngale Okuphezulu Ophudingi
I-Fast Speed ​​Jelly Glue
I-Medium Speed ​​Jelly Glue
I-Industrial Gelatin ye-Adhesive
IGelatin Yezimboni yeJelly Glue
I-Industrial Gelatin yokufanisa
IGelatin yezimboni yePaintball
I-Collagen yezilwane ezifuywayo
I-Capsule Engenalutho Kanzima
Okuphakelayo Ibanga Le-Collagen
Amaphilisi e-Gelken aqinile angenalutho avela ku-Gelken
Ukuphatha ngomlomo kuyindlela engcono kakhulu yokuthatha i-collagen
Abathengi kumele bazibuze ukuthi ingabe izithasiselo ze-collagen ze-topical, ezinjengamaski e-collagen, imaski yamehlo nama-shampoos, ziyizithako ezisebenzayo ze-collagen. Imikhiqizo manje etholakala yonke indawo ezinkundleni zokuxhumana kufanele ikhulise amazinga e-collagen esikhumba. Abanye baze baxube i-collagen ibe...
Izizathu zemikhawulo yaseChina ekusetshenzisweni kukagesi
Izindawo eziningi enyakatho-mpumalanga yeShayina zilinganisela ugesi. Isevisi yamakhasimende ye-State Grid: Abangebona izakhamuzi bazonikezwa isilinganiso kuphela uma kusekhona igebe. Amanani amalahle aya phezulu, ukushoda kwamalahle kagesi, ukuphakelwa kukagesi eNyakatho-mpumalanga yeShayina futhi kudinga ukushuba kwesimo. Kusukela ngoSepthemba 23,...
Njengoba sazi, ingxube yamandla e-China isabuswa amandla ashisayo, njengamandla omoya, amandla e-photovoltaic namandla ahlanzekile. Kodwa inani lincane, ngemva kwakho konke, impahla eluhlaza eyinhloko yamanani amalahle aphehla amandla ashisayo isetshenziswe amanani agxile emakethe...
I-Gelatin esikhundleni sePlasma
Ukushoda kwemithombo yegazi, ukwanda kwezifo ezithwalwa igazi, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bokumpontshelwa igazi okuzenzakalelayo, ukucaciswa kokusebenza kahle komtholampilo kwezinto ezithatha indawo ye-plasma kanye nokuncipha kwemiphumela emibi ...
Ukungaqondi kahle okuthathu mayelana ne-collagen
Okokuqala, ngokuvamile kuthiwa "i-collagen ayiwona umthombo ongcono kakhulu wamaprotheni wokudla kwezemidlalo." Mayelana nokudla okuyisisekelo, i-collagen kwesinye isikhathi ihlukaniswa njengomthombo wamaprotheni ongaphelele ngezindlela zamanje zokuhlola ikhwalithi yamaprotheni ngenxa yokuqukethwe kwayo okuphansi ...
Eyaziwa nangokuthi i-Gelatin noma i-fish Gelatin, ihunyushwa kusukela egameni lesiNgisi elithi Gelatin. I-gelatin eyenziwe ngamathambo ezilwane, ikakhulukazi izinkomo noma izinhlanzi, futhi yenziwe ngokuyinhloko ngamaprotheni. Amaprotheni akha i-gelatin aqukethe i-18 ami...
Umphumela wekhwalithi ye-gelatin kuma-capsules athambile
I-Gelatin ihlale idlala indima ehamba phambili ekukhiqizeni amaphilisi athambile, ngakho imingcele ehlukahlukene nokuzinza kwe-gelatin kunomthelela omkhulu ekukhiqizeni amaphilisi athambile kanye nekhwalithi yemikhiqizo eqediwe: ● Amandla we-jelly: Inquma amandla .. .
Imboni yesimanje ye-gelatin isichithe amakhulu eminyaka ithuthukisa izindlela zokukhipha i-gelatin ukuze kuthuthukiswe isivuno, kuncishiswe imfucuza, futhi kuthuthukiswe izinga nokuphepha; Nweba imisebenzi nezinhlelo zokusebenza ukuze uthuthukise inani lokudla okunempilo emikhakheni eminingi. Umsebenzi omkhulu lona. Akukho d...
Ukusetshenziswa kwe-Gelatin ku-Biomedical Materials
I-Gelatin, impahla yemvelo ye-biopolymer, iyisengezo sokudla esilungiselelwe i-hydrolysis emaphakathi yamathambo ezilwane, izikhumba, imisipha, imisipha nezikali. Akukho lutho oluqhathaniswa nalolu hlobo lwezinto eziphilayo ku-gelatin, ngenxa ye-biodegradability yayo, i-biocompatibi enhle ...
Thuthukisa umdlalo wakho we-S'mores ngama-marshmallows enziwe ekhaya
I-S'mores iyi-dessert yasehlobo yakudala, futhi ngesizathu esihle. I-marshmallow ethosiwe, e-squishy kanye namakhyubhu kashokoledi ancibilike kancane ahlanganiswa phakathi kwamabhisikidi amabili acolekileyo e-graham-akukho okungcono kunalokhu. Uma ungumuntu othanda i-S'mores futhi ufuna ukukhulisa izinga lalokhu kudla okumnandi, ngicela ...
I-Gelatin ihlangabezana nesidingo somhlaba wonke sokusimama
Eminyakeni yamuva nje, umphakathi wamazwe ngamazwe uye wanaka kakhulu intuthuko esimeme, futhi ukuvumelana sekufinyelelwe emhlabeni wonke. Ngaphezu kwanoma yisiphi isikhathi emlandweni wempucuko yesimanje, abathengi bashintsha imikhuba emibi ngethemba ...
123 Okulandelayo > >> Ikhasi 1/3
I-Gelken Gelatin ikhethekile ku-R&D, ukukhiqizwa nokumaketha kwe-gelatin kanye ne-hydrolyzed collagen. Ulayini womkhiqizo uhlanganisa izinhlobo ezingaphezu kweziyi-10 ezifana ne-gelatin edliwayo, i-gelatin yokwelapha, i-gelatin yezimboni, i-gelatin sheet kanye ne-collagen e-hydrolyzed.
402, Ibhilidi lesi-4, I-Aviation FTZ Plaza. No. 420, Gaoqi North Road, Xiamen 361006 China
Faka i-imeyili yakho futhi sizokuthumelela izinhlelo zolwazi lwakamuva.